स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्र : ‘सूर्य’ चिन्ह पहिलो नम्बरमै ! – Karnalikhabar
स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्र : ‘सूर्य’ चिन्ह पहिलो नम्बरमै !
काठमाडौं । ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रमा नेकपा एमालेको चुनाव चिह्न ‘सूर्य’ पहिलो नम्बरमा रहने भएको छ ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन चिह्न ‘रूख’ दोस्रो नम्बरमा रहनेछ । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नको रोलक्रम निर्धारण गर्ने भएको हो ।
सो कानुनअनुसार मतपत्रमा नेकपा एमालेको चुनाव चिह्न सूर्य पहिलो, कांग्रेसको ‘रुख’ दोस्रो, नेकपा माओवादी केन्द्रको गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा तेस्रो, जसपाको ढल्केको छाता चौंथो, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोपाका)को साइकल पाँचौं र नेकपा एकीकृत समाजवादीको चुनाव चिह्न कलम छैटौं नम्बरमा रहने भएको हो ।
यी ६ दल राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुन् । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
अघिल्लो - नेपाली दूतावासमा चुच्चे नक्सै गायव, नदेखिनु गम्भीर आपत्ति : दलहरू
जनकपुरधाम : मेयरलाई शौचालयमा एसी, शहरको फोहोर ज्यूँका त्यूँ ! - पछिल्लो